Ousted Zimbabwe dictator reportedly has guarantees that family’s business interests will not be targeted
Sun, Nov 26, 2017, 07:54 Updated: Sun, Nov 26, 2017, 07:55
A November 8th photograph of former president Robert Mugabe and wife Grace Mugabe. Photograph: Reuters
The exact sums to be paid to the former president and his wife Grace are still unclear, though one senior ruling party official with direct knowledge of the agreement said the total would not be less than $10m.
Mugabe’s 37-year rule left Zimbabwe with a worthless currency, massive debts, an impoverished population and an estimated unemployment rate of more than 80 per cent.
Mr Mnangagwa was sworn in on Friday before tens of thousands of people in Harare’s main stadium. The 75-year-old stalwart of the ruling Zanu-PF party promised a new era for his country, and said that he would govern for “all Zimbabweans”.
Her eldest son, Bellarmine Chatunga (25), recently enraged Zimbabweans by posting a clip on social media taken in a well-known Johannesburg nightclub showing him pouring a £200 bottle of champagne over a £45,000 watch on a night out in South Africa, boasting that “daddy runs the whole country”.–Guardian